Material Shell 42 yakatoburitswa, tarisa iyi yekuwedzera yeGnome | Linux Addicts
Material Shell 42 yakatoburitswa, ziva iyi yekuwedzera yeGnome
Darkcrizt | 07/04/2022 20:22 | Yakagadziridzwa ku 14/04/2022 17:21 | Desks
Mushure megore rekuvandudza yakazozivikanwa nekutumira kutangwa kweshanduro itsva custom shell "Material Shell 42", iyo inopa kushandiswa kwekuisa matairi uye spatial hwindo marongero pfungwa dzeGNOME.
Iyo purojekiti yakagadzirirwa sekuwedzera kuGNOME Shell uye ine chinangwa chekurerutsa kufamba uye kuwedzera kushanda zvakanaka nekuita otomatiki basa rakavharwa nemahwindo uye fungidziro yemaitiro ekuita.
Machira Shell inoshandisa spatial modhi kushandura pakati windows, zvinoreva kupatsanura maapplication akavhurika munzvimbo dzekushanda. Nzvimbo yese yebasa inogona kuva nemaapplication akawanda. Nokudaro, girasi rekushanda kwemahwindo ekushanda rinoumbwa, umo makoramu ari maapplication uye mitsara inzvimbo dzekushanda.
Mushandisi anogona kushandura nzvimbo yekuona nekufamba mugridi inoenderana nesero iripo, semuenzaniso, unogona kufambisa nzvimbo yekuona kuruboshwe kana kurudyi kuti uchinje pakati pezvishandiso munzvimbo imwechete yekushandira, uye kumusoro kana pasi kuti uchinje pakati pemaapplication.
Machira Shell inobvumira mushandisi kuunganidza zvikumbiro zvinoenderana nedingindira kana mabasa anoitwa nekuwedzera nzvimbo itsva dzekushandira uye kuvhura maapplication mazviri, kugadzira iri nyore kushandisa uye inofanotaurwa nzvimbo yehwindo.
mahwindo ese ane mataira uye haapindirane. Izvo zvinogoneka kuwedzera iyo yazvino application kune yakazara skrini, iratidze pamwe chete nemamwe maapplication kubva kunzvimbo yebasa, kuratidza ese mahwindo muchimiro chemakoramu kana magridi, pamwe nekupokana mahwindo akaturikidzana uchishandisa yakachinjika uye yakatwasuka uye docking nemahwindo akavakidzana.
Iyo mushandisi-yakagadziriswa spatial modhi inochengetwa pakati pekutangazve, ichikubvumidza iwe kuti ugadzire yakajairika nharaunda nekupinza-yakasarudzwa nemushandisi zvinhu. Kana application yatangwa, hwindo rayo rinoiswa panzvimbo yakambosarudzirwa, ichichengetedza kurongeka kwenzvimbo dzekushandira uye kubatana kwezvikumbiro kwavari. Pakutenderera, unogona kuona iyo yakagadzirwa gidhi dhizaini, mune ese akambotangwa zvikumbiro anoratidzwa munzvimbo dzakasarudzwa nemushandisi, uye nekudzvanya chiratidzo chekushandisa mune ino grid kunovhura iyo yaunoda application panzvimbo muiyo spatial modhi.
Inogona kudzorwa nekhibhodi, touch screen kana mbeva. Interface zvinhu zvakagadzirirwa mune Material Dhizaini dhizaini, pamwe nemwenje, yakasviba uye yakakosha (mushandisi inosarudzwa ruvara) matema anopihwa.
Kune mbeva uye yekubata screen control, iyo bhaa inoratidzwa kuruboshwe rwechidzitiro inoshandiswa. Iyo pani inoratidza ruzivo nezve anowanikwa nzvimbo dzekushandira uye inosimudzira yazvino nzvimbo yekushandira. Yakasiyana-siyana yezviratidzo, system tray, uye nzvimbo yekuzivisa inoratidzwa pazasi pepaneru.
Kuti ufambe nemahwindo ezvikumbiro zvinomhanya munzvimbo ino yekushanda, shandisa bhari yepamusoro, iyo inoshanda sebharaki rebasa. Mumamiriro ezvinhu ekutonga modhi yenzvimbo, iyo yekuruboshwe ine basa rekuwedzera nzvimbo dzekushandira uye kushandura pakati padzo, nepo pani yepamusoro ine basa rekuwedzera maapps kune yazvino nzvimbo yekushandira uye kushandura pakati pemaapplication. Iyo bhawa yepamusoro inoshandiswawo kudzora matairi emahwindo pahwindo.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza iwo maficha mukati chinotevera chinongedzo.
Wana Shell Material
Kune avo vari kufarira kukwanisa kuisa iyi Gnome yekuwedzeraIwe unogona kuita izvi zvakananga kubva kuGnome Plugins webhusaiti uye tsvaga "Material Shell" kana iwe unogona zvakare kusarudza kuzviita zvakananga. kubva pane iyi link iripazasi.
Kuti uite kuisirwa, zvinodikanwa kuti webhu browser ibatanidzwe neGnome inogoneswa.
Kana vari avo vanofarira kodhi, vanofanirwa kuziva kuti yakanyorwa muTypeScript uye yakagoverwa pasi peGPLv3 rezinesi. Iyo Material Shell 42 kuburitswa inopa rutsigiro rwekumhanya pamusoro peGNOME 42.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Material Shell 42 yakatoburitswa, ziva iyi yekuwedzera yeGnome
dbrand inounza iwe matehwe kana matehwe kuti uchinje yako Steam Deck
unsnap: chishandiso chitsva chekubva kubva snap kuenda kuFlatpak